Duulimaadkii ugu horeeyey ee Turkish Airlines oo maanta Muqdisho caga dhigtey – SBC
Duulimaadkii ugu horeeyey ee Turkish Airlines oo maanta Muqdisho caga dhigtey
Duulimaadkii ugu horeeyey ee heer caalami ah oo ku xiran khadadka duulimaad ee dunida ayaa maanta caga dhigtey garoonka diyaaradaha Aadan Cade International Airport ee magaalada Muqdisho kaasi oo ay bilowdey shirkadda diyaarada dalka Turkiga ee Turkish Airways.
Diyaarada Turkish Airlines ee maanta caga dhigatey garoonka Muqdisho wuxuu noqonayaa duulimaadkii ugu horeeyey safar diyaaradaasi asbuucii laba jeer ay ku tagi doonto Muqdisho, iyadoo marinkeedu noqonaya Istanbul-Khartum Muqdisho, waxaana uu qayb ka yahay balaarinta goobaha ay ka hawlgasho shirkadda midowday ee Star Alliance ee ay ka midka tahay Turkish Airlines oo caalamka u safra 189 magaalo, waxaana Muqdisho ay ku noqonaysaa 190.
Talaabadan ay ku dhaqaaqdey xukuumada Turkiga waxay ka qayb ka tahay dadaalka ay ku doonayso in ay Soomaaliya ku xirto aduunka intiisa kale iyadoo marka laga soo tago taageerada xoogan ee dhanka dhaqaalaha iyo gargaarka dadka abaaruhu saameeyeen uu Turkigu ku soo duway indhaha beesha caalamka caalamka xaalada Soomaaliya.
Duulimaadkan Turkish Airlines ee magaalada Muqdisho waxaa la socda wafdi balaaran oo uu hogaaminayo Ra’isalwasaare kuxigeenka Turkiga Bekir Bozdağ iyadoo wafdigiisa ay ka mid yihiin xubno ka tirsan dawlada, Ganacsato, dhakhaatiir iyo saxafiyiin kuwaasi oo goob joog u noqon doona xarig ka jarka bilowda duulimaadka Turkish Airlines.
Docda kale Ra’isalwasaare kuxigeen Bekir Bozdağ oo isagu ah isku xiraha hawlaha gargaarka Turkigu siinayo ummada Soomaaliyeed wuxuu kulamo la qaadan doonaa madaxda dawlada KMG uu oo ugu horeeyo Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubno ka mid ah dawladiisa iyagoo isla jeex jeexi doona xiriirka labada wadan iyo arimihii ugu dambeeyey ee laga sameeyey siyaasada iyo taakuleynta dadka abaaruhu saameeyeen.
Turkigu wuxuu ku bixiyey gargaarka abaaraha Soomaaliya aduun lacageed oo gaaraya 360 milyan oo doolar oo u dhiganta 650 milyan oo lacagta Turkiga.
Socdaalka wafdigan uu ku tagey Muqdisho waxaa si weyn looga dareemayaa gudaha garoonka Aadan Cade, wadooyinka isku xira magaalada inteeda kale iyo garoonka iyo waliba xarunta madaxtooyada iyadoo calanka Turkiga uu babanayo qaybo badan oo ka mid ah wadooyinka iyo dhismooyinka magaalada.
Amaanka ayaad loo adkeeyey waxaana la xiray qaybo ka mid ah wadooyinka magaalada gaar ahaan kuwa ay marayaan wafdiga Turkiga si loo xaqiijiyo amnigooda.
Warar dheeraad ah, sawiro iyo muuqaalo ku aadan wafdigan iyo safarka duulimaadkii ugu horeeyey ee Turkish Airways kala soco SBC Online saacadaha soo scoda Idinka ALLE.